के यहोवाले ख्रीष्टियनहरूलाई खानेकुराको अभाव हुन दिनुहुन्छ? | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
भजन ३७:२५ र मत्ती ६:३३ को अर्थ यहोवाले आफ्ना उपासकहरूलाई कहिल्यै खानेकुराको अभाव हुन दिनुहुनेछैन भन्ने हो?
दाऊदले “धर्मात्मा त्यागिएको, र तिनका सन्तानले भिक्षा मागेको मैले देखेको छैनँ” भने। तिनले त्यो कुरा अनुभव गरेका थिए। यहोवाले तिनको हेरचाह गर्नुभएको थियो। (भज. ३७:२५) तर दाऊदले परमेश्वरका उपासकहरूले कहिल्यै दुःख भोग्ने छैनन्‌ वा उनीहरूलाई कुनै अभाव हुनेछैन भन्न खोजिरहेका थिएनन्‌।
दाऊदले थुप्रै कठिन परिस्थितिको सामना गरेका थिए। एकपटक दाऊद शाऊलदेखि भाग्नुपरेको थियो। त्यतिबेला तिनीसित थोरै मात्र खानेकुरा थियो। त्यसैले तिनले आफू र आफ्ना मानिसहरूका लागि रोटी मागे। (१ शमू. २१:१-६) तर बाइबलमा तिनलाई कतै पनि भिखारी भनिएको छैन। त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि यहोवाले आफूलाई त्याग्नुभएको छैन भनेर तिनी ढुक्क थिए।
यहोवाले उहाँको स्तरबमोजिमको असल काम गर्नेहरूको खाँचो पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेर येशूले आश्वासन दिनुभयो। यो कुरा मत्ती ६:३३ मा पाउँछौं। उहाँले यसो भन्नुभयो, “[यहोवाको] राज्यलाई र उहाँको स्तरबमोजिमको असल कामलाई पहिलो स्थान दिइरहो अनि यी सबै [खाने, पिउने र लगाउने] कुरा तिमीहरूलाई दिइनेछ।” तर सतावट आइपर्दा आफ्ना “भाइहरू”-लाई खानेकुराको अभाव हुनेछ भनेर पनि येशूले बताउनुभयो। (मत्ती २५:३५, ३७, ४०) प्रेषित पावलले पनि त्यस्तै अनुभव गरे। तिनले भोक अनि प्यास खप्नुपऱ्यो।—२ कोरि. ११:२७.
हामीले विभिन्न किसिमका सतावट भोग्नुपर्नेछ भनेर यहोवाले बताउनुभएको छ। हामीले सैतानलाई मुखभरिको जवाफ दिन सकोस् भनेर उहाँ हामीलाई अभावमा पर्न दिनुहुन्छ। (अय्यू. २:३-५) जस्तै, हाम्रा सङ्गी विश्वासीहरूलाई नाजी यातना शिविरमा हालियो। निष्ठा तोड्न उनीहरूलाई विभिन्न किसिमले यातना दिइयो। उनीहरूलाई भोकभोकै राखेर पनि यातना दिइयो। यहोवाले उनीहरूलाई परीक्षा भोग्न दिनुभयो। आज पनि ख्रीष्टियनहरूले विभिन्न किसिमका परीक्षा सहनुपर्छ। तर यहोवाको नामको खातिर दुःख भोग्नेहरूलाई उहाँ अवश्य मदत गर्नुहुन्छ। (१ कोरि. १०:१३) हामीले फिलिप्पी १:२९ मा लेखिएका यी शब्दहरू मनमा राख्नुपर्छ, “ख्रीष्टको खातिर तिमीहरूलाई यो सम्मान दिइयो, कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास राख्ने मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ।”
यहोवाले आफ्ना मानिसहरूलाई मदत गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जस्तै, यशैया ५४:१७ मा यहोवाले यसो भन्नुभएको छ, “तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियार पनि बेकामको हुनेछ।” यी लगायत बाइबलका अन्य प्रतिज्ञाहरूबाट यहोवा आफ्ना जनहरूलाई समूहको रूपमा सुरक्षा दिनुहुन्छ भनी स्पष्ट हुन्छ। तर व्यक्तिविशेषको रूपमा भने सबै ख्रीष्टियनले परीक्षा भोग्नुपर्ने हुन्छ; जीवनसमेत गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ।
पाठकहरूको प्रश्न—सेप्टेम्बर २०१४
पाठकहरूको प्रश्‍न—अप्रिल २०१८
पाठकहरूको प्रश्‍न—मार्च २०१८
पाठकहरूको प्रश्‍न—डिसेम्बर २०१७